Miss Asia Pacific World 2014သရဖူ မေမြတ်နိုးကသမိုင်းတင် ဆွတ်ခူး
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ Miss Asia Pacific World 2014 ပြိုင်ပွဲရဲ့
ပထမဆုကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အလှမယ် မေမြတ်နိုးက ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်။
သရဖူ The Irrawaddy (Burmese Version)
အိမ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ နောက်ဆုံး အဆင့် ၂ ဦးတည်း ကျန်တဲ့ အချိန် မှာ မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုး က Miss Asia Pacific Wolrd 2014 ရဲ့ သရဖူကို အောင်နိုင်သူအဖြစ်ကြေညာလိုက်ချိန်မှာ အွန်လိုင်း ကနေ တိုက် ရိုက်ကြည့်ရှုနေသူတွေပါ အလွန်ဝမ်းမြောက်သွားကြတာပါ။
1st Runner - Korea , 2nd Runner -Macau, 3rd Runner- Philippines, 4rh Runner- India, 5th Runner - Singapore, 6th Runner - Thailand တို့က အသီးသီး ရရှိသွားကြပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာကတည်း ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ မေမြတ်နိုးရဲ့ အလှအပနဲ့ အစွမ်းအစတွေကို အတော်ချီးကျူးခဲ့ကြ တာပါ။
အခုလို မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုးဟာ မစ္စ ပစ္စိဖိတ်အလှမယ် သရဖူနဲ့ အတူ Popularity Award ဆု လည်း ရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/31/20140အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြား တိုက်ပွဲ (၅) နာရီကြာဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြ
(နိရဉ္စရာ- ၃၁ မေလ ၂၀၁၄)
နယ်စပ်တွင် ဘင်္ဂလာ; BGB တပ်ဖွဲ့ ယမန်နေ့က ကင်းလှည့်နေစဉ် ( ဓါတ်ပုံ- အင်တာနက်)
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ အကြား ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲမှာ (၅) နာရီ ကြာမြှင့်ခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ သတင်းစာများက ဖေါ်ပြကြသည်။
တိုက်ပွဲမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တောင်တန်းနယ် နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ် ပိုင်ချရီ အရပ်တွင် နံနက် ၁၁ နာရီကျော်မှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော အလောင်းအား မည်သည့်နေရာတွင် ရှိကြောင်း မြန်မာဘက်က နေရာအများအပြားကို ညွှန်ပြ ဆက်သွယ် ပြောဆိုပြီးနောက် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့က သွားရောက်ရှာဖွေစဉ် မြန်မာဘက်က စတင် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်က စွပ်စွဲ ပြောကြားသည်။
သို့အတွက် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်က တုန့်ပြန် ပစ်ခတ်ခဲ့ရသည်ဟု BGB ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် Aziz Ahmed ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
သို့အတွက် လောလောဆယ်တွင် အလောင်းကို ရှာဖွေရန်နှင့် အလံတင်အစည်းအဝေးကို နယ်စပ်တွင် ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
မျက်မြင်များ၏ အပြောအရ လွန်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပစ်ခတ်မူကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ BGB တပ်ဖွဲ့များ ဖရိုဖရဲပြိုကွဲသွားစဉ် သေဆုံးသွားသူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်၏ အလောင်းကို မြန်မာတပ်ဖွဲ့က ၀င်ရောက် ဆွဲယူသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုနယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခကြောင့် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာ အစိုးရထံ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသလို အနီးကပ်စောင့်ကြည်နေသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အကြီးအဲ Maj Gen Aziz က ပြဿာနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်တွင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် သံတမန်ရေးအရပါ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
နယ်စပ်အနီးပြည်သူများက သေနတ်ပစ်ခတ်သံများ ကြားရကြောင်း၊ အများစု ပြည်သူများမှာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၀- ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် ၎င်း၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဦး အောင်ဆန်းဦးတို့၏ အမှုအား ပြည် ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်၌ မေ ၃ဝရက်က အပြီးသတ်စီရင်ချမှတ်ရာ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက် မှ တက်သည့်အယူခံကို ပယ်ချခံခဲ့ရ သည်ဟု သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အမှုအား မေ ၃ဝရက် နေ့ တွင် တရားသူကြီးတစ်ဦး၏ရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည်ဟု ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်ချုပ် အမှုစာရင်း အမှတ် စဉ်(၁၃)တွင် ဖော်ပြထားပြီး ယခုကဲ့ သို့ ပယ်ချခဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီ ဝင် ဦးထွန်းထွန်းဟိန်းကဆိုသည်။
”ဒီနေ့အမှုမှာဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဘက်က တက်တဲ့အယူခံကို ပယ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု ဦးထွန်းထွန်းဟိန်း က ပြောသည်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ် အမှုစာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့၏အမှုအား အမှတ်စဉ်(၁၃)တွင်ဖော်ပြ ထားပြီး တရားမအယူခံမှု၊ အမှုအ မှတ် ၄၄၁/၂၀၁၃၊ အယူခံ တရားလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အယူခံ တရားလိုရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ အယူခံ တရားပြိုင် ဦးအောင်ဆန်းဦး(၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းညွန့် နိုင်)၊ အယူခံတရားပြိုင်ရှေ့နေ ဦး အေးလွင် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်ဟု ဖော် ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါ အမှုစီရင်ချက် ချမှတ် မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးသို့ ဆက် သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော် လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါ အထူးအယူခံမှုအား နေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး (၁)ကြားရှေ့မှောက်၌(တစ်ပါးထိုင်) ကြားနာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ မေ ၃ဝရက်တွင် အပြီးသတ်စီရင်ချက် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နအဖ စစ်အစိုးရလက် ထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သားကြီးဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် ဦးအောင်ဆန်းဦးက ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရှိနေထိုင်နေသည့် တက္ကသိုလ်ရိပ် သာလမ်း အမှတ်(၅၄) နေ အိမ်အား အမွေဆိုင်အဖြစ် ထုခွဲရောင်းချရန် တရားရုံးတွင် တရားမမှုအဖြစ် စွဲဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
[Democracy today Daily Newspaper--]
ဘဘ ကလည်း မလိုလားဘူးတဲ့
Ohn Myint Htay
မနက်က ၃ပွင့်နဲ့ တပည့်၂ယောက်ကလည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းသွားပါတယ်
အေ့ .... ဗြှစ်...........
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ၏ခံစားခွင်.မှာ သိန်းပေါင်း ( ၂၃၀၀ ) ဖြစ်
ကျွန်တော် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထဲသို.၀င်တော.မည် ။ ဘယ်သူတွေဘာထင်ထင် ကျွန်တော်ဝင်မည် ။ ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတော.နောက်ခံရှိထားမှဖြစ်မည် ။ သူများတွေဝင်သောပါတီထဲသို.လည်း အုတ်အရောရောကျောက်အရောရော သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်ကာ ရောတိရောရာ မလုပ်ချင် ။ ကိုယ်ထင်တာကိုယ်လုပ်တာကျွန်တော်.၀ါသနာဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီ ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည် ။ယခင်ပါတီဥက္ကဌဦးသိန်းစိန်သည် လာဘ်မစားဘူးဟုနာမည်ကျော်ကြားသော Mr. Clean ဖြစ်သည် ။ ယခုပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မည်.သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟုကျွန်တော်ယုံသည် ။ ထို.ကြောင်.ပါတီသို.ကျွန်တော်ဝင်မည် ။သို.သော် ကျွန်တော်သည် ဥာဏ်ရည်နုံနဲ.သူဖြစ်သည် ။ ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီနှင်.ပါတ်သက်လာလျင် ကျွန်တော်မရှင်းလင်းသော ၊ မည်သို.မျှမစဉ်းစားတတ်သော ကိစ္စလေးအနည်းငယ်ရှိသည် ။မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိသည် ။ ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းဆိုသလိုထိုကိစ္စများကိုသက်ဆိုင်ရာပါတီခေါင်းဆောင်များမှကျွန်တော် သဘောပေါက်နားလည်လာအောင် ရှင်းပြနိုင်ပါက အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပေမည် ။ ရှင်းပြမည်ဟုလည်းယုံကြည်မျှော်လင်.ပါသည် ။ ထိုအခါကျွန်တော်သည် ပါတီထဲသို.၀င်ရန်သာရှိပါတော.သည် ။
ပထမအချက်အနေဖြင်.ကျွန်တော်မေးလိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်း နှင်.ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် အတူတူပဲလားဟူသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ။အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်းသည် အစိုးရပိုင်အသင်းကြီးဖြစ်ခဲ.သည် ။ အစိုးရပိုင်အသင်းဖြစ်စဉ်က အသင်းပိုင်ရုံးခန်းများ၏ မြေနေရာနှင်. အဆောက်အဦ အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေဖြင်.တည်ဆောက်ထားသော ရုံးခန်းများဖြစ်သည် ။ ထိုသို. နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင်.ရုံးများသည် အသင်းကြီးအဖြစ်မှ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအဖြစ်သို.ပြောင်းလဲလိုက်သောအခါ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်သို.ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင်မဟုတ်သဖြင်. ယခင်နိုင်ငံတော်ပိုင်အသင်းကြီး၏မြေနေရာ ၊ဘဏ္ဍာငွေ ၊အဆောက်အဦ ၊လက်ကျန်ငွေ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစသည်များကိုတစ်ခုမကျန် နိုင်ငံတော်သို.ပြန်အပ်ရပေမည် ။ ပြည်သူတို.၏ ချွေးနည်းစာဖြစ်သော နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ သည် ပါတီတစ်ခုအတွက်သုံးလို.ရမရကျွန်တော်သိချင်သည် ။ ထို.ကြောင်.ကြံ.ခိုင်ရေးအသင်းကြီး၏မြေများ ၊ တိုက်များ ၊ ရုံးခန်းများ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက မိဘအမွေသားသမီး ဆက်ခံသလို ယူလိုက်ခြင်းမှာ တည်ဆဲဥပဒေနှင်.ညီမညီ ၊နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို.ကိုယ်.သဘောနှင်.ကိုယ်ပေးပိုင်ခွင်.ရှိမရှိ ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းကိုပါတီအတွက်လွှဲပြောင်းရယူပိုင်ခွင်.ရှိမရှိ ကျွန်တော်သိလိုပါသည် ။
ဒုတိယသိလိုသည်မှာအသင်းကြီးကိုစတင်တည်ထောင်သူ နာယကကြီးဖြစ်သော အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေအကြောင်းဖြစ်သည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းမှဆင်းသက်လာသည်ဖြစ်ရာ အသင်းကြီး၏မူလစတင်တည်ထောင်သူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပါတီကရှင်းပြနိုင်လိမ်.မည်ဟုယူဆ၍ မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်သိလိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း) ယခုနေနေသော အိမ်တော်ဟုခေါ်သည်.နေပြည်တော်မှ မြေနေရာနှင်.အဆောက်အဦသည် သူ၏ချွေးနည်းစာဖြင်. လစာဝင်ငွေထဲမှစုဆောင်းကာ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းလော ၊ သို.တည်းမဟုတ် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ္ဍာငွေများဖြင်.ဆောက်လုပ်ထားခြင်းလောမရှင်းသဖြင်.မေးချင်ပါသည် ။ သူ.ငွေဖြင်.သူဆောက်လုပ်ထားပါသည်ဟုတစ်ခွန်းဖြေလျင်ဘာမှစောဒကတက်၍ ရှေ.ဆက်မမေးတော.ပါ ။သို.သော် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်ငွေဖြင်.ဆောက်ထားပါသည်ဆိုလျှင် မရှင်းတာလေးအနည်းငယ်ရှိပါသည် ။ နိုင်ငံတော်ဝန်းထမ်းတစ်ယောက်အားတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ပေးထားသောအိမ်သည် သက်ပြည်.ပင်စင်ယူ၍ (အမှန်မှာ သက်ကျော်ပင်စင်ဟုပင်ပြောရမလိုဖြစ်ပေသည် ။ စကားချပ် ။ ) ရာထူးမှအနားယူသွားသောအခါ ထိုအိမ်တွင်ဆက်နေ၍ရမရ သိလိုပါသည် ။ နိုင်ငံတကာတွင် အမေရိကန်သမ္မတအဆက်ဆက်သည်ရာထူးမှ နှစ်စေ.၍ဆင်းသွားသောအခါ အိမ်ပေါ်မှဆင်းပေးရပါသည် ။ နောက်သမ္မတနေရန်အိမ်အသစ်ထပ်ဆောက်ရရိုးထုံးစံမရှိပါ ။ အိမ်ဖြူတော်သည် လေးနှစ်တစ်ခါ (သို.မဟုတ် )ရှစ်နှစ်တစ်ခါ သမ္မတများပြောင်းနေပါသည် ။ ဗြိတိန်တွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်အသစ်တက်လာသောအခါ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် လန်ဒန်မြို. အမှတ် (၁၀ ) ဒေါင်းနင်းလမ်းနေအိမ်မှ ထွက်ခွာပေးကြရစမြဲဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တပ်မတော်သားဝန်ထမ်းများသည် အသက် (၆၀) ပြည်.၍ပင်စင်ယူသောအခါ ရရှိထားသော လိုင်းခန်း (သို.မဟုတ် )အရာရှိအိမ်ယာကို စစ်တပ်သို.ပြန်အပ်ရပါသည် ။ က.ပ.စ တွင်အလုပ်လုပ်သော ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေ တပ်မတော်သားတစ်ဦးသည် ပင်စင်ယူသောအခါ နေစရာမရှိတော.သဖြင်. သူတို.မိသားစုထဲမှတစ်ယောက်ကို အလုပ်ထဲတွင်ပြန်သွင်းထားပြီးမှ ထိုအိမ်ယာကိုပြန်နေခွင်.ပြုရန်လျှောက်လွှာတစ်ခါပြန်တင်ကာ ဘောင်ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ရပါသည် ။ အခြား အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းများလည်းထိုနည်းနှင်နှင်ဖြစ်ပါသည် ။ ၀န်ထမ်းဘ၀ကရခဲ.သောအိမ်သည် ပင်စင်ယူသောအခါ အပြီးအပိုင်ရလိုက်သည်ဟူ၍လည်းမကြားဖူးပါ ။ ထို.ကြောင်.တပ်ချုပ်ကြီး( ဟောင်း)၏အိမ်သည် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လား ၊နိုင်ငံတော်ပိုင်အိမ်လားသိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချူပ်ရဲမြင့် တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှကင်းလွှတ်
ထို ဥပဒေ အရ...အိမ်ရှင်အား ပုဒ်မ ၂၈၅ နဲ့ တရားစွဲစရာမလိုတော့ပြီမို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချူပ်အား တရားစွဲဆိုခြင်းမှ ....ကင်းလွှတ်စေ.....။
ရဲမြင့်ကို မဖမ်းဘူးကွာ ဆိုလည်း ပြီးတာကြီးကို။ ခင်ဗျားတို့လက်ထက်မှာ ဥပဒေဆိုတာ လက်ထဲက အီးပဲလေ ရှူချင်ရှူ ရှိူက်ချင်ရှူက်ပေါ့။
ရာဇာမင်းလိုင်းပိတ်တော့ တောင်ပြာတန်းက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁၂ရက်နေ့က နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမှာ တောင်ပြာတန်း Express မီးလောင်လို့ ၁၃ဦး သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
အဖြစ်မှန်ကတော့ ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်ရာက ရှေ့ကကားကိုတက်ကြိတ်ပြီး မီးလောင်တာပါ။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ခရီးသည်တွေက ကားတံခါးဖွင့်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံသော်လည်း ယာဉ်မောင်းက မဖွင့်ပေးဘဲ အချိန်တွေဆွဲနေပြီး မရှူနိုင် မကယ်နိုင်ဖြစ်မှသာ ခရီးသည်တွေကိုထားပြီး ထွက်ပြေးပါတယ်။ (ဒီဖြစ်စဉ်ကို ယာဉ်ပေါ်ပါခရီးသည်များကို မေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။)
ဒါပေမယ့် ဒီထွက်ပြေးတဲ့ ဒရိုင်ဘာကိုခုထိမမိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒရိုင်ဘာကို မမိရင် ဘာမှ အရေးယူလို့မရဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ယာဉ်လိုင်း ကိုလည်း အရေးမယူဘူး။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ သေတဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါ။ သေတဲ့ကိစ္စမှာ အစိုးရကလဲ ဘာမှ
မကူဘူး။ ယာဉ်လိုင်းကလည်း ရှေ့ပွဲ၊ နောက်ပွဲ ကြည့်ပေးဖို့မပြောနဲ့ ဒီနေ့အထိ ဖုန်းသတင်းတောင် မမေးဘူး။ လူကြီးတွေနဲ့ပိုင်တယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်။ ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့လဲ သိရပါတယ်။ ရာဇာမင်းလိုင်းပိတ်တော့ တောင်ပြာတန်းက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ ငါတို့က အေးဆေးပဲတဲ့။ ဒီလိုဖြစ်လို့ လူတောင်ပိုသိလို့ စီးတဲ့သူပိုများလာသေးတဲ့။
လူကြီးနဲ့ပိုင်လို့ ရဲကိစ္စကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး သေတဲ့သူတွေအတွက် ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုကိုတောင် သတင်းတောင်မမေးဘူး။ သေသူမိသားစု၊ ဒဏ်ရာရသူတွေကသာ သူတို့ဆီကို ဆက်သွယ်ရတာ။ သူတို့က စဆက်သွယ်တာမရှိဘူး။ ကားဂိတ် တစ်ဂိတ်လုံး ကားဂိတ်မန်နေဂျာဆိုတဲ့ ကိုသော်မီတစ်ယောက်ပဲ
ရှိတယ်ထင်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက မေးလည်း လအ အတိုင်းပဲ။ အဲ့လူကလဲ အချိုးမပြေဘူး။ မေးလိုက်ရင် နေပြည်တော်က အဘခေါ်လို့ သွားနေရလို့။ ကျွန်တော်တို့က နေပြည်တော်က အဘက ခဏခဏခေါ်နေတာ သွားနေရလို့ မအားဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ဆီမလာနိုင်ဘူးတဲ့။ တွေးကြည့်တော့ သေတဲ့သူက သေတာ ၁လတောင်ရှိပြီ။ နေပြည်တော်အဘက တစ်ရက်တစ်ခါခေါ်နေလို့ ၁လအတွင်းမှာတောင် သူတို့ကားဂိတ်က တစ်ခါမှမလာနိုင်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကားဂိတ်တာဝန်ခံ အဆင့်ကတောင် ဟိုလူကြီးနဲ့ ပိုင်သလို၊ ဒီလူကြီးနဲ့ပိုင်သလို ကိုင်တုတ် သေးတယ်။ ယာဉ်လိုင်းလူကြီးတွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေဆိုတာ ခုထိ မျက်နှာကို မမြင်ဖူးလိုက်ပါဘူး။
သေသူတွေကြောင့် ကျန်ရစ်သူ တစ်ချို့မှာ ခိုကိုးရာမဲ့တယ်။ တစ်ချို့မှာ ဘ၀ပျက် မတတ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့က ငွေကြေးမပြည့်စုံဘူးဗျာ။ စိတ်မကောင်းဘူး။ လျော်ကြေးဆိုရင်လည်း ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တာ ပေးသင့်တယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ လျော်ကြေးဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါတွေ ယာဉ်လိုင်းက တာဝန်ယူရမှာပဲ။
တခြားနိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရကလည်း တာဝန်ယူတယ်။ ဒီမှာတော့ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်။ အလောင်းမြေကျတာ တောင် နာရေးကူညီမှုအသင်းရှိလို့။ မဟုတ်ရင် ယူကျုံးမရ စရာပဲ။
ဒဏ်ရာရသူတွေကိုလည်း မစို့မပို့ပေးတယ်ဆိုရုံပေးပြီး နှစ်သိမ့်တယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးနဲ့ ကိုယ်တစ်ခြမ်း မီးလောင်တာကို ၁သိန်းပေးပြီးပြီးပြီတဲ့။ ကြားရတာနားခါးတယ်။ တစ်သိန်းပေးတဲ့အချိန် တစ်ခါပဲလာတယ် သတင်းတောင် မမေးဘူးတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေပေါင်းပြီး သမ္မတဆီကို တိုင်စာပို့ထားပါတယ်။ ဒီစာကို Attached ဖိုင်နဲ့ တွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
Online သတင်းကလည်း ထိရောက်အောင် ဆောင်းပါးရေးပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းတာပါ။ ဘာလို့ အကူအညီတောင်းလဲဆိုရင် ရာဇာမင်းကားကလည်း ဒီအချိုးချိုးပြန်ပြီ။ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း နိုင်ငံရေးက လွဲရင် လူမှုရေးကို
စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကို ဟင်းရွက်ကန်စွန်းမှတ်တယ်။ ငွေများငွေနိုင်၊ အမှုပျောက်တဲ့ခေတ်ကိုး။ တာဝန်ရှိသူက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှာမရဘူး။ သေလို့ ရယက ထောက်ခံစာ တောင်းတာတောင် အဟောက်ခံရတဲ့ဘ၀။
ခံပြင်းတာက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပိုင်တယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက
ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေကို ဂရုမစိုက်တာပဲ။ အစိုးရကလဲဗျာ ရာထူးတွေတာယူထား ၀န်ကြီးတွေကလည်း ပေါ။ ၀န်ကြီးဌာနတွေတာ ပေါတာ။ ပြည်သူတွေအတွက် ရပ်တည်ပေးတဲ့ ဌာန ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ ဒါတွေက ဘယ်အထိဖြစ်နေအုန်းမှာလဲ။
နောက်ဒီလို Accident တွေဖြစ်ရင် ပြည်သူ့အသက်ကို စတေးရမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေဘက်က ဘယ်သူတွေ ရပ်တည်မလဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲ။ ဘယ်လိုတာဝန်ယူကြမှာလဲဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့ မီဒီယာကို အကူအညီတောင်းပါတယ်။ ခုက မီဒီယာက လှုပ်မှ ထိုင်ခုံပေါ်က လိုက်လုပ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်။
၂၇.၅.၂၀၁၄ ရက်နေ့က ၀န်ကြီးဌာနတွေဆီကို စာပို့ပါတယ်။ တောင်ပြာတန်းကားဂိတ် တာဝန်ခံ ကိုသော်မီဆိုသူက သေသူထဲက မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကောပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့အတွက် အာမခံ ၅သိန်းရအောင် ကားဂိတ်က လျှောက်ပေးနေတယ်လေတဲ့။ ခင်ဗျားတို့ တိုင်စာပို့စရာလားတဲ့။ ၅သိန်းဆိုတာ နာရေးအတွက် ဆွမ်းကျွေး ၁ပွဲစာတောင်မရှိ ပါဘူး။ ဒါကိုလိုက်လုပ်နေတယ်အကြောင်းပြပြီး ၁လကျော်အထိ ပစ်ထားတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ ကားဂိတ်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒါတွေဟာ အမှန်တရားတွေပါ။ တစ်ခုခုမေးမြန်းစရာရှိခဲ့ရင် သေဆုံးသူမိသားစုဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရ သူတွေကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်မရပေမယ့် ပစ္စည်း/ငွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ခရီးသည်တွေကို လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Miss Asia Pacific World 2014သရဖူ မေမြတ်နိုးကသမိုင်...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချူပ်ရဲမြင့် တရားစွဲဆို...